Emerald hombe yepasirese - Hukuru kuvandudza 2021 - Nyowani Vhidhiyo
Iyo emerald yakakura kwazvo pasi rose Inkalamu, Shumba Emerald asi Iyo Bahia Emerald inoonekwa senge hombe emerald yakambowanikwa.
Zvinoenderana nekuti isu tinotarisa bhokisi rakagadzirwa nematombo akati wandei kana kristaro imwechete.
Emerald yakakura pasi rose yakambowanikwa
Iyo emerald yakakura kwazvo pasirese ndeyeBahia Emerald: 1,700,000 carats
Iyo Bahia Emerald ine imwe yeakakura ega shard akambowanikwa. Iro dombo, rinorema angangoita 341 kg kana 1,700,000 carats, rakatangira kuBahia, Brazil uye makristasi akasimbiswa mune irwo dombo. Yakapona nepaburi retsono panguva yeHurricane Katrina muna 2005 panguva yekuchengetera mune imwe imba yekuchengetera muNew Orleans.
Paive nekukakavadzana kwevaridzi mushure mekunge zvanzi zvakabiwa munaGunyana 2008 kubva kunzvimbo yakachengetedzwa muSouth El Monte muLos Angeles County, California. Iyo gem yaive yawanikwa uye kesi uye muridzi zvagadziriswa. Dombo rakakosheswa pamamirioni mazana mana emadhora, asi kukosha kwechokwadi hakuna kujeka.
Yakakura 180,000 carats emerald yakafukunurwa nguva pfupi yadarika
Chinyorwa chikuru che180,000 carats chakafukunurwa nguva pfupi yadarika nevashandi vemumigodhi mukati meMugodhi weCarnaiba muBrazil. Iyi inoshamisa emerald specimen inomira 4.3 tsoka pakureba uye inokosheswa kusvika angangoita $ 309 mamirioni.
Dombo rakawanikwa mune imwe nzvimbo yeBrazil inozivikanwa kugadzira mabwe anokosha, iyo Carnaiba Mine mukati medunhu rePernambuco. Sumbu rematombo rakawanikwa mazana maviri emamita kudzika mumugodhi uye raida vanhu gumi pasvondo rakazara kuti vabvise nekusimudza sumbu kumusoro.
Iyi specimen inoumbwa mune akazara zana nemakumi masere makarati emerald emabheriri. Tichifunga nezve saizi, kushomeka uye huwandu hwemakristaro, nyanzvi dzinofungidzira kuti iyo specimen yese inogona kuita madhora zviuru makumi matatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe.
Iwo epasi rese emerald kristaro ndiyo Inkalamu, iyo Shumba Emerald: 5,655 carats
Iyo hombe pasi rose yakamboita emerald, inorema 1.1kg uye yakakosha inofungidzirwa £ 2m, yakawanikwa mumugodhi muZambia. Iyo 5,655 carats gem yakawanikwa nekambani yemigodhi Gemfields paKagm, mugodhi wakakura kwazvo wepasi rose, muna Gumiguru 2, 2020.
Yakatumidzwa kuti Inkalamu, zvinoreva shumba mumutauro wechiBemba. Gemfields akati chete mashoma uye anokosha matombo anopiwa mazita. Zita reBemba rakasarudzwa mukuremekedza basa rekambani yekuchera rekuchengetedza.
Iyo Emerald Unguentarium: 2,860 XNUMX carats
Emerald Unguentarium, 2,860 ct (20.18 oz) emerald vase yakavezwa muna 1641, iri kuratidzwa muImperi Treasure, Vienna, Austria.
Iyo Tsvene Emerald Buddha: 2,620 makarati
Yakavezwa kubva ku3,600 ct Zambia emerald muna 2006, iyo Sacred Emerald Buddha chifananidzo inorema 2,620 ct.
Mumiriri weSiddhartha Gautama ndechimwe chezvakakosha zvakavezwa pasi rese. Akaratidzirwa mune yakajairwa mudra chinzvimbo icho chinowanzo sanganisirwa nekuraira kunhengo dzemhuri yake (sangha kana hupirisita) kuti vasiye kupopotedzana pakati pavo.
Ihuremu mukati memazana maviri nemazana matanhatu emakarati, iine yakanaka bhuruu green hue (nekuda kwekusachena kwechromium uye vanadium), kwandiri kwandiri yakanakisa ruvara rweemaradhi, uye iri yemahara isina inclusions.
Izvo zvisingawanzoitika kuti hunhu hwakadai kuve neumwe mugumo pane kutemerwa mumatare anokosha, saka danho rakatorwa nekambani kuveza raive rakashinga. Yaive yakavezwa nekukwenenzverwa neye master jade sculptor anonzi Aung Nyein, anobva kuBurma asi anogara muThailand.
Iyo Guinness Emerald Crystal: 1,759 makarati
Iyo Guinness Emerald Crystal yakawanikwa mumugodhi weCoscuez emerald ndiyo imwe yemakristuru emhando yepamusoro eemerald mumakristasi munyika, uye ndiyo yekristaro yakakura kwazvo muemerald kristaro iri yeBanco Nacionale de la Republica muBogota, guta guru re Korombiya.
Kwayakabva zita rekuti Guinness hakuzivikanwe, asi iyo yakareba, 1759-carat, yakajeka girazi kristaro pasina mubvunzo yakanga iine humbowo hwese hwekupinda mubhuku reGuinness yezvinyorwa zvepasirose sedombo hombe-rehunhu pasi rose kweanenge mamwe makore kusvika yakapfuurwa nemamwe makuru echisikigo emerald makristaro.
Iyo 1,686.3 carats LKA uye 1,438 carats Stephenson emeralds
Zvisikwa zvirongwa zvekugadzira chimwe chinhu chaicho-chinomisa moyo muhukuru hwacho. Iwo 1,686.3 carats LKA uye 1,438 carats Stephenson emeralds akawanikwa muna 1984 na1969.
Zvakateedzana mukati meHiddenite nharaunda iri pakati pematombo anoshamisa epasirese, asi masayendisiti akakurumbira anokoshesa aya mabwe makuru, echisikigo kristaro inokamuraniswa pakati pemaraimari akakura akambowanikwa munyika: Iyo LKA naStephenson.
Mim Emerald: 1,390 makarati
Yakakura, di-hexagonal prismatic crystal ye1,390 carats isina kuchekwa ine yakanaka yakadzika green green. Iri pachena uye inoratidzira mashoma inclusions mune yepamusoro 2/3, uye inochinja muchikamu chezasi. Yakavakirwa paMim Museum, Beirut, Lebanon.
Duke weDevonshire Emerald: 1,383.93 carats
Iyo Duke yeDevonshire Emerald ndeimwe yematombo makuru epasi rose uye ane mukurumbira asina kuchekwa, anorema 1,383.93 carats. Kutanga mumugodhi paMuzo, Colombia, yakapihwa chipo kana kutengeswa naMambo Pedro I wekuBrazil kuna William Cavendish, 6 Duke weDevonshire muna 1831. Yakaoneswa kuGreat Exhibition muLondon muna1851, uye munguva pfupi yapfuura ku Natural. History Museum muna 2007
Iyo Isabella Emerald: 964 makarati
Isabella Emerald, ane 964 carats akacheka matombo, ndeye Archeological Discovery Ventures, LLC.
Isabella Emerald anowana zita rayo kubva kuna Mambokadzi Isabella wePortugal, mambokadzi mukadzi waMambo Charles V (1516 kusvika 1556), Holy Roman Emperor, King weSpain, uye Archduke weAustria, vakagara nhaka humambo hukuru hwaitenderera muEurope yose, kubva kuSpain. uye Netherlands kuenda kuAustria uye Humambo hweNaples, uye zvakare nzvimbo dzekumhiri kweSpain America.
Mambokadzi Isabella akachiva kristaro uye akashuvira kuitora, mushure mekunzwa kupenya nhoroondo dzedombo kubva kuna Hernan Cortez, mutsamba yakamunyorera achibva kuMexico. Chinokosha chinozivikanwa sechakavanzika "Emerald of Judgment" chakapihwa Cortez, naMontezuma II, Mambo weAztec Kingdom, panguva iyo Cortez akapinda muguta reTenochtitlan nemauto ake musi waNovember 8, 1519. Hernan Cortez akatumidza dombo mukuremekedza Mambokadzi Isabella, Mambokadzi mukadzi waCharles V, Mutsvene Mutsvene weRoma Mambo uye Mambo weSpain.
Iyo Gachalá Emerald: 858 makarati
Iyo Gachalá Emerald, imwe yeakakosha kwazvo uye ane mukurumbira emeralds munyika, akawanikwa mugore ra1967, mumugodhi unonzi Vega de San Juan, iri muGachala, guta riri muColombia, iri 142 km kubva kuBogota. Gachalá Chibcha zvinoreva "nzvimbo yeGacha." Mazuva ano kristaro iri muUnited States, uko kwakapihwa kuSmithsonian Institution neNew York City jeweler, Harry Winston.
Iyo Patricia Emerald: 632 makarati
Iyo Patricia yakakura uye yakanakisa mavara akaomeswa. Pamakumi matatu nemakumi matatu nematatu carats, iyo dihexagonal, kana gumi nemaviri-mativi, kristaro inoonekwa seimwe yemakemikari makuru munyika. Yakawanikwa muColombia muna 632, yakatumidzwa zita remwanasikana wemuridzi wemugodhi.
Izvo zvinokanganisa mukristaro ino zvakajairika asi zvinokanganisa kusimba kwegem rakaoma. Iyi specimen ndeimwe yemashoma mashoma emeralds akachengetedzwa asina kuchekwa. Nhasi, Colombia ichiri sosi huru yepasi emerald.
Iyo Mogul Mughal Emerald: 217.80 makarati
Iyo Mogul Mughal Emerald ndeimwe yeakakura emeralds anozivikanwa. Imba yekutengesa Christie akaritsanangura se:
Iyo rectangular-cut emerald inozivikanwa seMogul Mughal inorema 217.80 carats, iyo yakashata yakanyorwa neShi'a kukumbira mune yakanakisa naskh script, yakanyorwa 1107 AH, iyo yekumberi yakavezwa pese pese nekushongedzwa kwefoliate, iyo yepakati rosette yakatenderedzwa nerimwe chete hombe poppy maruva, nemutsara wemaruva madiki matatu epoppy chero mativi, iwo mabheji akavezwa akavezwa nemuchinjiko maitiro incision uye herringbone yekushongedza, rimwe nerimwe remativi mana rakachera zvekubatanidza, 5.2 * 4.0 * 4.0 cm.
Pakutanga kucherwa muColombia, yakatengeswa muIndia, uko mabwe ainyanya kudikanwa nevatongi veMughal Empire. Iyo Mogul Mughal yakasarudzika pakati paMughal makristasi mukutakura zuva - 1107 AH (1695-1696 AD) - iri mukati mehutongi hweAurangzeb, mambo wechitanhatu. Nekudaro, vatongi vaMughal vaive maSunni, nepo zvakanyorwa, Salawat weheterodox akazvipira kuna Hassan ibn Ali naHusayn ibn Ali anozivikanwawo saNad e Ali, ndiShia, zvichiita kuti zvive sezviri kuti hazvisi zveAurangzeb, asi kune mumwe vakuru vake kana vakuru.
Yakatengeswa musi wa27 Gunyana 2001 naChristie ne £ 1,543,750, kusanganisira premium yemutengi. Kubva muna17 Zvita 2008, yaive mune iyo Museum yeIslam Art, Doha, Qatar.
Carolina Emperor: makumi matanhatu makarati
Iyo 64.82 carat Carolina Emperor iri kuisa makomo eNC pamepu! Iyi inozivikanwa North Carolina Emerald yakanzi yakafemerwa nechidimbu chakafanana cheshongo chaive chaCatherine Mukuru.
Mambokadzi aive nekanakisa akavezwa akavezwa akavezwa akaumbwa seColombia emaradhi ane madhaimani akakomberedza emerald pane bhurocha raitengeswa kukisheni yaChristie kweanopfuura mamirioni emadhora 1.65. Karolina Emperor, akawanikwa munzvimbo iyi muHiddenite, NC, akatengwa gore rapfuura uye izvozvi achangobva kupihwa kuNorth Carolina Museum ye Natural Sayenzi muRaleigh, NC.
Chikamu chikuru pane zvese izvi ndechekuti iye anobatsira abvunza kuti arambe asingazivikanwe. Chiratidziro chiri pamuyuziyamu chinonzi chine makristasi matatu asina kuchekwa. Dombo hombe pamatombo aya anorema makirati mazana maviri nemazana maviri nemakumi maviri neshanu ibhuruu rinoshuviwa rebhuruu rinogona kufananidzwa nematombo anokosha anotsvakwa naMuzo.
Emerald yeSaint Louis: 51.60 makarati
Iyo Saint-Louis emerald yakashongedza korona yeMadzimambo eFrance anobva kumigodhi yeAustria pamwe neakawanda ekare emerald. Iyi migodhi yaiburitsa kusvika muzana ramakore rechi19, ingangove kusvika kuwanikwa kweUral kuisa muna 1830.
Iyo Chalk Emerald: 37.82 carats
Vatongi vehumambo veBaroda State, nyika yemuchinda muIndia, vakambova nedombo. Yakanga iri yepakati peiyo emerald nedhaimani chishongo chakapfekwa naMaharani Saheba, uyo akazvipa kumwanakomana wake, Maharajah Cooch Behar.
Muzana ramakore rechimakumi maviri, dombo racho rakadzokororwa kubva pahuremu hwaro hwepakutanga hwe20 carats (38.40 g) uye ndokugadzikwa muchindori chakagadzirwa naHarry Winston, Inc., uko iko kwakakomberedzwa nemadhaimani makumi matanhatu-akaita-peya, anosvika angangoita gumi nemashanu makarati.
Iringi yakapihwa naVaMai naAmai O. Roy Chalk kuSmithsonian Natural History Museum muna 1972 uye iri chikamu che wekuSmithsonian's National Gem uye Mineral Unganidzo.
Asina zita emerald
Makaroti 7,052 asina kuchekwa kristaro kubva kuColombia, ndeyavo voga uye yaionekwa seinokosha.
Makaroti 1,965 asina kuchekwa dombo reRussia, rinoratidzwa pa Natural History Museum yeLos Angeles County.
A 1,861.90-ct makateti asina kuchekwa uye asina kutumidzwa zita kubva kuHiddenite, NC, iri yega. Yakawanikwa muna 2003, iyi parizvino ndiyo emerald inozivikanwa zvikuru yakawanikwa muNorth America.
Makristani makuru mashanu asina kutaurwa nemazita kubva kuMuzo, Colombia, akachengetwa mudura reBank reRepublic of Colombia, anorema kubva pamakumi maviri nemaviri carats kusvika 220 carats.
Fred Leighton akatengesa 430 carats yakavezwa Mughal dombo kwemamirioni akati wandei emadhora.
iye al-Sabah Unganidzo kubva Kuwait inoratidzira akawanda akanaka mabwe, anosanganisira 398 carats kristaro mune hexagonal fomu uye 235 carats crystal bead.
Kristaro, goridhe uye enamel-17-century Mughal waini mukombe 7 cm yakatengeswa kuChristie kwe £ 1.79 mamirioni muna 2003.
Makarati 161.20 akavezwa Mughal ibwe rakawana $ 1.09 mamirioni kuna Christie muna 1999.
Iyo yepasirese nhema emerald
Teodora: 57,500 makarati
Iri dombo rakasvibirira rine makirogiramu gumi nemashanu rakanzi ndiyo emaradhi huru pasi rose uye yakanzi Teodora, zita rinobva muchiGiriki uye rinoreva "chipo chinobva kuna mwari."
Iyo dombo, zvisinei, inogona kunge isiri iyo $ 1-miriyoni-uyezve ibwe muridzi wayo anonzi Regan Reaney akarikurudzira se.
Mr. Reaney akasungwa muna Ndira 2012 muKelowna mukati memukati meBC, sezvo Royal Canadian Mounted Police vakamutora. VaReaney vanopomerwa mhosva dzekubiridzira muOntario, RCMP yakati muchidimbu chirevo, uye Hamilton Mapurisa aive nemvumo yekumusunga.
Mr. Reaney akange asingambozivikanwe nemapurisa eKelowna, asi haana kunzwa hunhu hwekuchengeta chimiro chakaderera. Aive aine gem-hukuru hwakakosha gem yekutengesa, shure kwezvose.
Muchokwadi, raive bheriri chairo, asi rakanga rakadhayiwa.
Emerald yakakura pasi rese: FAQ
Yakawanda sei emerald emunyika akakosha?
Chinokosha chikuru pasi rose chakambowanikwa chisina kufukurwa mune imwe shard, iyo Bahia Emerald inorema angangoita mamirioni e1.7, kana 752 lbs. Yakawanikwa munzvimbo yeBahia yekumabvazuva kweBrazil. Dombo hombe, iro parizvino rinogara muvhareji muLos Angeles, rinogona kukosha kusvika madhora mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemashanu.
Ndiani ane emerald hombe pasi rese?
Kristaro hombe pasi rose yakambowanikwa, inorema 1.1 kg uye yakakosha mari inofungidzirwa kuti inosvika zviuru zviviri zvemadhora, yakawanikwa mumugodhi muZambia. Iyo 2 carats gem yakawanikwa nekambani yemigodhi Gemfields paKagm, mugodhi mukurusa wepasi rose, muna Gumiguru 5,655, 2.
More ruzivo rwe gemological uye emeralds ari kutengeswa mudura redu
kupinda Izvi re muna nhau uye tagged emerald zvikuru, emerald chikuru munyika, emerald chikuru, emerald chikuru pasi rose, epasi rose emerald.